हामीले आर्जन गरेका ज्ञान र सीपलाई मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गरौ : डा. उपेन्द्र महतो, संस्थापक अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ | Rajmarga
साढे एक दशक पहिलेसम्म विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरु नेपाल र नेपालका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रुपमा अलग अलग बसी चिन्तन–मनन गथ्र्याैं । तर, त्यस्ता कुनै पनि प्रयत्न गैरआवासीय नेपालीहरुलाई जोड्ने कडी हुन सकेनन् । त्यसैले एउटा सामूहिक या संस्थागत अभियानको आवश्यकत्ता खड्किरह्यो ।
देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने संयुक्त प्रयास के हुन सक्छ त ? हामीले मस्कोमा बसेर गहन छलफल ग-यौं । र, विभिन्न देशमा बसिरहेका साथीहरुसँगको भलाकुसारी र सरसल्लाहपछि मनको अन्तरकुन्तरमा एउटै कुरा भेटियो– एउटा संस्था या एउटा अभियान जरूरी छ । त्यही महसुस गरेर सन् २००३ को अक्टोबरमा गैरआवासीय नेपालीहरुको पहिलो सम्मेलन भयो, नेपालमा ।
अक्टोबर छानिनुको कारण के हो भने विदेशमा बस्ने नेपाली लामो समय घर फर्किएका हुन्नन् । ‘फेस्टिभ मुड’ मा परिवारसँग बसेर दसैं, तिहार मनाउने चाहना जो कोहीलाई हुन्छ । चाडबाडमा सबैलाई नेपाल जान मन लाग्ने र फर्किने सिजन पनि भएकाले अक्टोबर जति सुहाउँदो महिना अरु के हुन सक्थ्यो ?
नेपालीको हित अनि नेपालको समृद्धि र विकासका लागि केही गरौं भन्ने एक मात्र भावनाले नै यो संस्था अगाडि बढेको छ । र, गैरआवासीय नेपालीले केही गर्न खोजेका छन्, केही गर्न सक्षम छन् र अति नै इमानदारी र संवेदनशीलताका साथ त्यसमा अगाडि बढिसकेका छन् भनेर नै नेपाल सरकारले ११ अक्टुबरलाई गैरआवासीय नेपाली दिवस मनाउने निर्णय ग-यो । यो गैरआवासीय नेपालीका लागि गौरवशाली दिन हो । र, ठूलो जिम्मेवारीको दिन पनि हो । यसले प्रत्येक गैरआवासीय नेपाली मित्रहरुको जिम्मेवारी बढाइदिएको छ । यसमा तपाईंहरुको साथ सदैव आवश्यक छ ।
एनआरएनएमा लामो समयसम्म (पुँजी) मात्रै बहसको विषय बन्थ्यो । तर, नेपालको पछौटेपनमा पैसाको मात्र अभाव हो जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले आर्जन गरेका अथाह ज्ञान र सीपलाई अब मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नु जरुरी छ । त्यसैले ज्ञान, सीप तथा प्रविधिबारे बहस सुरु गरौं भनेर यसपालि नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं, विज्ञ सम्मेलन ।
विभिन्न देशमा काम गरिरहेका प्राध्यापक, अनुसन्धाताका साथै विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ठूला विज्ञहरुका लागि एउटा ‘प्लेटफर्म’ हुनेछ, विज्ञ सम्मेलन । नेपालमा कुन कुरा छिटो सिक्न सकिन्छ ? कुन कुरा छिटो उत्पादन गर्न सकिन्छ र नेपालको माटो, हावापानी, यहाँको संस्कृति, आवश्यकता र बजार सुहाउँदो छ ? सम्मेलनमा हामीले विदेशमा पढेका, सिकेका, कमाएका र व्यावहारिक अनुभवका आधारमा विज्ञहरुबीच छलफल चलाउने जमर्को गरेका हौं ।
एनआरएनए ७९ वटाभन्दा बढी देशमा नेश्नल च्याप्टर रहेको एउटा ठूलो संस्था भइसकेको छ । पहिला विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नेपालमा सुरक्षा छैन, भ्रष्टाचार बढी भयो, नेपाल गरिब भयो भनेर मात्र कुरा काटिरहेका हुन्थे । तर, पछिल्लो समय केही गैरआवासीय नेपालीमा मैले नेपालका लागि के गरेको छु त ? नेपालमा गरिबी छ, अशिक्षा छ र मैले बाहिर बसेर कुरा मात्र गर्नुभन्दा नेपालमा सुधारका लागि के गरेको छु त भन्ने गहन भावना समेत जागृत भएको छ । त्यो एकदमै ठूलो कुरा हो ।
साँच्चै राष्ट्रले मलाई के दियो भनेर मात्रै होइन, मैले चाहिँ के दिएको छु त भनेर सोच्ने बेला आएको छ । किनकि हिजोका दिनमा हामीसँग प्रशस्तै बहानाबाजी थिए, मुलुकको परिवेशलाई लिएर, अस्थिरतालाई लिएर । तर, आज फेरि त्यस्तै कुरा दोहो-याइरहनु गलत हो । लामो संक्रमणकालको अन्त्यपछि मुलकमा एउटा सहज वातावरण बनेको छ । सम्भावना देखिएको छ । त्यही सम्भावनाको आडमा हामी मुलुकको भविष्य निर्माणमा योगदान गर्न सक्छौं ।
म दोहो-याउन चाहन्छु– अनुसन्धानका साथै विभिन्न विधाका विज्ञ गैरआवासीय नेपाली मित्रहरुको सहभागितामा नेपालमा पहिलोपल्ट विज्ञ सम्मेलन हुन लागेको छ । विज्ञ सम्मेलनमा मैले, हामीले नेपालका लागि के गर्नुपर्छ, के गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा छलफल हुन्छन् ।
गैरआवासीय नेपाली, नेपाल सरकार प्रतिनिधि, नेपालका विज्ञ, सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिनिनिधिको छलफलपछि व्यावहारिक रुपमा नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन हामीले के कसो गर्न सक्छौं ? त्यसमा अगाडि बढ्नका लागि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।
Previous post: आर्थिक र बौद्धिक लगानी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्-जीवा लामिछाने, संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ
Next post: प्रचण्डले भने – वामदेवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छैन